Archenemy(2020) | MM Movie Store
ဟမျးစတားဆိုတဲ့ ဆယျကြျောသကျကောငျလေးဟာ သူ့အဖလေိုပဲ ပုံပွငျဇာတျလမျးလေးတှဖေနျတီးပွောဆိုခငျြတဲ့ လူငယျလေး။လူငယျဆနျဆနျစိတျကူးယဉျဇာနျကောငျတှဖေနျတီးခငျြနတေဲ့သူ။ဒီလို ထူးဆနျးတဲ့ဇာတျကောငျတှကေို ဖနျတီးရငျးခကျခဲစှာသူ့အတှကျရုနျးကနျနရေတဲ့အဈမကို ပွနျလညျထောကျပံ့ပေးဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ကောငျလေးဆိုပါတော့…
တဈနတေော့ လမျးကွားထဲမှာ နံရံကိုလကျသီးနဲ့ထိုးနတေဲ့ လူထူးဆနျးတဈယောကျကိုတှပွေီ့းစကားပွောရာမှ သူတို့ခငျသှားကွတယျ..နောကျတဈခုက ခပျကွောငျကွောငျ သဘာဝလှနျစှမျးအားတှအေကွောငျးပွောတဲ့လူထူးဆနျးကွီးကွောငျ့ကောငျလေးအတှကျတော့ ဇာတျကှကျတှရေနသေလိုပဲ…
ဒီလူကွီးက ပွောတာတှကေ တကယျ့ကိုတဈခမျးတဈနားတှေ…ဂွိုလျတှေ စှမျးအားရှငျတှပေါသလို သူကိုယျတိုငျလညျးစှမျးအားရှငျတဈဉီးဖွဈကွောငျးတှပေေါ့…ကောငျလေးကလညျးယဉျယဉျလေးရူးသလိုဖွဈနတေဲ့ ဒီလူကွီးနဲ့နတေို့ငျးစကားပွောပါတယျ..
ကောငျလေးကတော့ ပွောသမြှ စိတျကူးယဉျဇာတျလမျးအဖွဈကိုပုံသှငျးပါတယျ..အဲ့ဒီနောကျ ကောငျလေးထငျသလို ဒီလူထူးဆနျးကွီးဟာ ယဉျယဉျလေးရူးနတေဲ့သူမဟုတျဘဲ သူပွောနတေဲ့အကွောငျးအရာတှကေအမှနျတှဖွေဈလာတဲ့အခါမှာတော…နောကျထပျ ဘယျလိုပွဿနာတှကွေုံကွမလဲဆိုတာကိုတော့….
ဟမ်းစတားဆိုတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေးဟာ သူ့အဖေလိုပဲ ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းလေးတွေဖန်တီးပြောဆိုချင်တဲ့ လူငယ်လေး။လူငယ်ဆန်ဆန်စိတ်ကူးယဉ်ဇာန်ကောင်တွေဖန်တီးချင်နေတဲ့သူ။ဒီလို ထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကို ဖန်တီးရင်းခက်ခဲစွာသူ့အတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့အစ်မကို ပြန်လည်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ကောင်လေးဆိုပါတော့…
တစ်နေတော့ လမ်းကြားထဲမှာ နံရံကိုလက်သီးနဲ့ထိုးနေတဲ့ လူထူးဆန်းတစ်ယောက်ကိုတွေ့ပြီးစကားပြောရာမှ သူတို့ခင်သွားကြတယ်..နောက်တစ်ခုက ခပ်ကြောင်ကြောင် သဘာဝလွန်စွမ်းအားတွေအကြောင်းပြောတဲ့လူထူးဆန်းကြီးကြောင့်ကောင်လေးအတွက်တော့ ဇာတ်ကွက်တွေရနေသလိုပဲ…
ဒီလူကြီးက ပြောတာတွေက တကယ့်ကိုတစ်ခမ်းတစ်နားတွေ…ဂြိုလ်တွေ စွမ်းအားရှင်တွေပါသလို သူကိုယ်တိုင်လည်းစွမ်းအားရှင်တစ်ဉီးဖြစ်ကြောင်းတွေပေါ့…ကောင်လေးကလည်းယဉ်ယဉ်လေးရူးသလိုဖြစ်နေတဲ့ ဒီလူကြီးနဲ့နေ့တိုင်းစကားပြောပါတယ်..
ကောင်လေးကတော့ ပြောသမျှ စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းအဖြစ်ကိုပုံသွင်းပါတယ်..အဲ့ဒီနောက် ကောင်လေးထင်သလို ဒီလူထူးဆန်းကြီးဟာ ယဉ်ယဉ်လေးရူးနေတဲ့သူမဟုတ်ဘဲ သူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအမှန်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော…နောက်ထပ် ဘယ်လိုပြဿနာတွေကြုံကြမလဲဆိုတာကိုတော့….
My Horny Neighbour Girl – Link 1